DHAGEYSO: Duqa Muqdisho oo sheegay inay jiraan ganacsato lacago siiya Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Duqa Muqdisho oo sheegay inay jiraan ganacsato lacago siiya Al-Shabaab
DHAGEYSO: Duqa Muqdisho oo sheegay inay jiraan ganacsato lacago siiya Al-Shabaab
Muqdisho (Halqaran.com) – Duqa magaalada Muqdisho, ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa sheegay inay jiraan ganacsato farabadan oo lacago baad ah siiya Ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira Dowladda Soomaaliya.
Cumar Filish ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dhibaato ku hayaan Dadka Shacabka, hayeeshee taasi aysan aqbaleyn, isla markaana ay dagaal adag la geli doonaan Al-Shabaab.
Duqa Muqdisho ayaa waxaa uu uga digay ganacsatada Soomaaliyeed inay lacag siiyaan Al-Shabaab oo uu sheegay in markii dambe lacagahaas ay Carruurtooda ku dilayaan.
Hadalkaan ayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaa uu maanta ka sheegay banaanbax looga soo horjeeday Al-Shabaab looguna baroor diiqayey qarixii Ex-Control oo lagu qabtay Muqdisho.
Halka hoose ka dhageyso codka Cumar Filish:
aan u midowno
ganacsato lacag siisa Al Shabaab
u hanjabay Al Shabaab